About – IMF
Imperial Myanmar Finance Company Limited (IMF) ကို ၂၀၁၅၊ ဇွန်လ၊ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ကုမ္ပဏီမှတ် ပုံတင်အမှတ် ၈၄၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆(ရက) ဖြင့် ကုမ္ပဏီစတင် ထူထောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ နိူဝင်ဘာလ ၂၃ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိူင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ NBFI/FC-12/11/2017 ဖြင့် ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့ အစည်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
အထက်ပါ မြန်မာနိူင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့်ပြုချက်အရ မတည်ရင်းနှီးငွေ ကျပ်သန်းသုးံထောင် အပြည့်ထည့်ဝင်၍ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၉ ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၄၉)၊ မိုးကောင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင် ရုးံခန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပရန် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ကုမ္ပဏီမှ ဆောင်ရွက်ပေးနေသော ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှာ
စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လှည့်ပတ်ရန်ပုံငွေ (Working Capital) ချေးငွေထုတ်ချေးပေးခြင်း။
IM Finance နှင့် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် (Dealer Contract) ချုပ်ထားသောကုမ္ပဏီများ၊ ဆိုင်များနှင့် တစ်ပိုင်တစ်နိူင်လုပ်ငန်းငယ်များအား ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
IM Finance နှင့် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် (Dealer Contract) စာချုပ်ချုပ်ထားသော ခရီးသွားကိုယ်စားလှယ် များနှင့် ဆက်သွယ်၍ ခရီးသွားချေးငွေ (Travel Loan)များ ချေးပေးခြင်း။
၀န်ထမ်းချေးငွေ ၀န်ထမ်း၏ လစာ(၂)ဆ ချေးပေးပြီး ပြန်ဆပ်ချိန်အား (၁)နှစ် သတ်မှတ်ပေးထားပြီး အချိန်စောပြီး ပြန်ဆပ်လိုပါကလည်း လက်ခံပေးခြင်း။
စသည့် ၀န်ဆောင်မှုများကို ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
The Imperial Myanmar Finance Co., Ltd (IMF) is approved to open by the Directorate Of Investment and Company Registration (DICA) under licensed of 849/2015(YAKA) since 2015 June 11.
The Central Bank of Myanmar issued the License No- NBFI/FC-12/2017 for activation Non-Bank Financial Services.
The Imperial Myanmar Finance (IMF) was established on June 9th 2018 with an authorized capital of3Billion kyats by the Central Bank of Myanmar. The address of IMF is No.49, Moe Kaung Road, Yankin Township, and Yangon, Myanmar.
Imperial Myanmar Finance (IMF) is giving following services,
Loans for many kinds of Business and working capital.
Giving services of Hire Purchase for the applicants by conducting and introducing with authorized dealers, shops and companies.
Financial services for small and medium businesses.
Travel Loans for the applicants by linking with IMF’s authorized travel agents.
Staff loans for the staffs offering double loan amount of salary/income and six months, one year or applicant’s choice repayment system.